अस्ट्रेलियामा एक नेपालीको यसरि भयो दुखद निधन ! « Etajakhabar
अस्ट्रेलियामा एक नेपालीको यसरि भयो दुखद निधन !
प्रकाशित मिति : ८ मंसिर २०७६, आईतवार १०:४६
यो पनि : अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा नेपाली विद्यार्थीहरुले गरे १.६ अर्ब डलरको योगदान
प्रत्येक वर्ष अध्ययनका लागि अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीहरु जाने क्रम झन् बढेको छ । अष्ट्रेलियाको मुख्य आम्दानीको स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू पनि हुन् । पछिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार नेपाली विद्यार्थीहरुबाट अष्ट्रेलिया सरकारले एक अर्वभन्दा बढीको कमाई गरेको देखाएको छ ।
सन् २०१७–०१८ मा नेपाली विद्यार्थीहरूले अष्ट्रेलियाको अर्थव्यवस्थामा १.६ अर्ब डलर योगदान गरेको देखाएको छ। अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा आर्थिक वर्ष २०११–२०१२ मा नेपाली विद्यार्थीहरूबाट ५६७ मिलियन अमेरिकी डलर योगदान गरेका थिए ।
तर, सन् २०१८ सम्ममा आइसक्दा यो रकम बढेर अर्ब नाघेको छ । अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा आर्थिक योगदानका लागि स्रोत देशहरूको पदानुक्रम विगत केही वर्षदेखि स्थिर रहेको छ । चीन,भारतपछि नेपाल आउने गरेका छन् ।
चिनियाँ विद्यार्थीलाई सामान्यतया ‘गुणस्तरीय विद्यार्थी’ को रूपमा लिइन्छ । उनीहरू देशको शीर्ष विश्वविद्यालयहरूमा भाग लिन्छन्। गत वर्ष उनीहरूको योगदान ११ बिलियन डलर थियो जबकि भारतीय विद्यार्थीहरूले ३.७ अर्ब डलर योगदान गरे। पछिल्लो केही वर्षहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा अस्ट्रेलिया सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी जाने देश बनेको छ ।